आफ्नो करियर कसरी बनाउने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने ५ टिप्स – ramechhapkhabar.com
कसको सपना नहोला र आफ्नो करियरलाई सफल बनाउने ? तर हामी आफ्नो करियरको निर्णय गर्न नसक्दा हामे पछाडी परिरहेका छौं । यदि तपाइ कलेजको विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा भर्खर कलेजमा भर्ना हुन लाग्नु भएको छ भने तपाईं आफ्नो जिवन र करियरको विषयमा आफैं निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । यो यस्तो समय हो, जब तपाईंले लिएको एउटा निर्णयले तपाईंको भविष्यमा असर गर्नसक्छ ।
५. अब तपाईले प्रोफेश्नल बन्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ । यदि रोजगार शुरु गर्नुअघि नै तपाइले प्रोफेश्नल बन्न सिक्नुभयो भने भविषयमा कुनै अफिसमा काम गर्न तपाईंलाई असहज हुने छैन । यसले तपाईलाई कुनै समस्या निम्त्याउन दिँदैन र भविषयमा आफ्नै व्यवसाय गर्दा पनि यसले धेरै मद्दत पुराउने छ ।